संसदीय दलको नेता चयन गर्दै जसपा - नेपालबहस
| १४:३९:४० मा प्रकाशित
२८ फागुन,काठमाडौं । पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनलगायत विषयबारे निर्णय गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा अपराह्न शुरु भएको छ । बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गर्नाका साथै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
जसपा उच्चस्रोतका अनुसार सो दलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ । “दलको विधान पारित भएपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने पनि एजेण्डा छ, समय भएमा सम्भवतः आजै नेता चयन हुन्छ, अहिले व्यक्तिको टुङ्गो लागेको छैन”, जसपा स्रोतले भन्यो । राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको जसपाले हालसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । जसपामा ३४ सांसद रहेकामा दुई जना निलम्बित रहेकाले हाल ३२ मात्र छन् ।
सत्ता साझेदारीका लागि निरन्तर परामर्शमा रहेको जसपाले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त छलफल सकारात्मक दिशामा केन्द्रित रहेको र आज थप छलफल हुने जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
जसपाले कैदीबन्दीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनलगायतको माग राख्दै आएको छ । पार्टीले संसदीय दलको बैठकपछि आजै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दैछ । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा साँझ जसपाका शीर्ष नेताले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको जसपा नेता केशव झाले बताए ।
ओलीको जस्तै फण्डा मधेसवादीको ५ दिन पहिले
प्रधानमन्त्री र जसपाका शीर्ष नेताबीचकाे छलफल सकारात्मक ५ दिन पहिले
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता ५ दिन पहिले
सामाजिक दूरी कायम राखी कालिका मन्दिरमा भक्तजनको दर्शन ११ घण्टा पहिले
आईपीएलमा चेन्नई दोस्रो स्थानमा उक्लियाे १८ घण्टा पहिले
नयाँदिल्लीमा एक साताको लागि लकडाउन गरिने १ दिन पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय २ दिन पहिले
बुद्धकाे नयाँ वर्ष अफर, कहाँ जान कति भाडा ? ७ दिन पहिले
काठमाडौं उपत्यकासहित ललितपुरमा असिना पानी ! ४ दिन पहिले
राप्रपा निकट टुकोनको महिला विभाग गठन २ दिन पहिले
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ३ हप्ता पहिले
नयाँ वर्षसंगै वनक्षेत्रमा पिकनिक गर्नेको चहलपहल ७ दिन पहिले
एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले हकप्रद शेयर विक्री गर्ने, चयन गर्यो बिक्री प्रबन्धक १ हप्ता पहिले
आईफोनको फेसआईडी असुरक्षित २ वर्ष पहिले
नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश ८ महिना पहिले
युनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता अवार्ड ‘एजिङ नेपाल’ लाई ७ महिना पहिले